Kingston Nucleum, dhammaan dekedaha aad ugu baahan tahay MacBook-kaaga | Waxaan ka socdaa mac
Kingston Nucleum, dhammaan dekedaha aad ugu baahan tahay MacBook-gaaga
Go'aanka Apple ee ah inuu sameeyo la'aan dhammaan dekedaha kumbuyuutarkiisa muhiimka ah, MacBook, iyo kaliya inuu siiyo USB-C ayaa muran dhaliyay. Waxa kale oo ay ahayd kiiska MacBook Pro, oo leh afar dekedo USB-C laakiin aan lahayn akhristaha kaarka caadiga ah, HDMI ama xoogaa USB caadi ah.
Taasi waa sababta ay ugu dhowdahay inay lagama maarmaan tahay in la helo adabtarad leh noocyo kala duwan oo dekedo ah, iyo Kingston Nucleum wuxuu u taagan yahay dhismaheeda adag, dekedaha la heli karo iyo waxqabadka. Waxaan isku daynay waana kuu sheegeynaa waxyaabaha aan dareensan nahay.
Waa qalab aad u wanaagsan, oo adag oo adag isla sanduuqa. Marhoreba waxaan isku dayay adapters badan oo noocan ah iyo midkoodna kuma aanan dareemin inaan ka horreeyo mid ka mid ah sidoo kale dhismay sida Nucleum-kan. Way ka weyn tahay kuwa kale, waa run, waana ka culus tahay, laakiin iyagu waa faahfaahin aan lahayn ahmiyadda ugu yar iyada oo la tixgelinayo inay ku jiri doonto shandaddayda shandaddayda. Aluminium iyo balaastig waa walxaha loo adeegsado isku-ururshahan, dhammaadkuna wuxuu u dhigmaa kuwa ay tahay inay soo bandhigto nooc sida Kingston ah.
Dekedaha la bixiyo waxaa ka mid ah laba USB-A 3.1, hal USB-C oo kombiyuutarka ku shubaysa, USB-C 3.1 kale, microSD UHS-I akhristaha, mid kale oo SD UHS-I iyo II ah, iyo 1.4K la jaan qaadi kara HDMI 4. Maaddaama aan ahay isticmaale MacBook ah, waxaan u arkaa inay tahay mid aad u macquul ah inaan haysto dekedda USB-C si aan uga qaado laptop-ka iyo mid kale oo aan u gudbiyo xogta, maaddaama qalabyo badan oo noocaan ah ay ka mid yihiin oo keliya dekedda USB-C, oo haddii aad kombiyuutarkaaga lacag ka qaadeyso dekeddaas gebi ahaanba lama adeegsan. Xidhiidhyadu waa xasilloon yihiin, iyada oo aanu jirin wax khasaare ah oo la xidhiidha inta lagu jiro wareejinta faylka.
Awoodda lacag bixinta ee uu bixiyo adabtaradan ayaa ah illaa 60W, taas oo kaliya dhibaato ku noqon doonta MacBook Pro 15 ″ oo u baahan 87W. Moodooyinka 13 "ama MacBook 12" waxay awoodi doonaan inay batterigooda ku hayaan 100% inta ay la shaqeynayaan Nucleum-kan. Faahfaahin muhiim ah: inta lagu guda jiro wareejinta feylka waa inaadan ku xirmin xeedho ama kajarinMaaddaama adabtarada uu ka go'ay xaalad kasta, wareejintiina la joojiyay. Ogaanshaha in tani dhacdo muhiimad weyn ma lahan, laakiin waa inaad tixgelisaa.
Kingston's Nucleum waa adabtarada dekedo badan leh oo leh qaab dhismeed iyo tayo qalab oo ka dhex muuqda tartanka. Xawaaraha dekedda USB-ga, oo leh laba dekedo USB-C ah oo u oggolaanaya awood lacag-bixin ah illaa 60W ka dhig mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan kuwa doonaya qalab lagu kalsoonaan karo oo waara. Waxaa lagu heli karaa kudhowaad € 65 dukaamada sida Amazon () way ka qaalisan tahay alaabada kale ee la midka ah ee tartanka laakin farqiga ayaa laga arki karaa isla sanduuqa. Dabcan, boorso gaadiid ayaa la la’yahay.
Tayada qalabka iyo dhammaadka
Laba dekedo USB-C ah (amraya + xog)
USB 3.1 5Gbps
Ilaa 60W xamuul
Iyadoo aan boorso qaadan
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Gargaarka » Kingston Nucleum, dhammaan dekedaha aad ugu baahan tahay MacBook-gaaga
Ku noqoshada dugsiga ee MacBook-gaaga, ka dhig mid qurxoon sannad cusub
Xusuusnow waxa ay tahay inaad sameyso haddii aad iibsato pendrive cusub oo loogu talagalay macOS iyo Windows!